Ogaden News Agency (ONA) – Ogeysiiska Ciida iyo London: Ealing Common Park kula ciid jaaliyada Ogaden oo caawi agoonta
Ogeysiiska Ciida iyo London: Ealing Common Park kula ciid jaaliyada Ogaden oo caawi agoonta
Ururka OYSU iyo Jaliyada Ogaden ee London ayaa soo qaban qaabiyay barnaamij ciida loogu tala galay in lagu caawiyo Agoonta iyo Iskuulka Xirsi Mahad ee Dhadhaab. Maalinimada Ciida oo la filayo inay noqoto Isniinta ama Salaasada waxaa shacabweynaha Islaamka ah isugu imaan doonaan oo lagu tukan doona Barxada Ealing Common halkaas oo lagu wada ciidi doono salaada kadib.
Hadaba Ururka OYSU London ayaa isu xilqaamay maalinkaas inay soo diyaariyaan Cunooyin iyo cabitaano iyo alaabo kale oo lagu gadi doono goobta ciida, iyada oo dhaqaalaha kasoo baxa lagu kaalmeyn doono Kaalmada caruurta aggoonta iyo Dugsiga Agoonta ee Xirsi Mahada Accademy dugisigaas oo ay ku jiraan caruur gaadhaysa 700 ilmood oo gacanta ay ku heyso Haayada Samafalka Agoonta ee HAORA.
Waxaa markaas la ogeysiinaya in dhamaan jaaliyada kasoo qeyb gasho munaasabada ciidan, kana qeyb qaadato barnaamijkan lagu kaalmeynayo Madarasada Xirsi Mahad Accademy.
Haayada HAORO waxay gacanta ku heysa Dugsiyada Xirsi Mahad Accademy oo lagu barto duruusta Maadiga ah waxuuna u dhigmaa Iskuulada Kenya. Waxaa kale lagu bartaa Duruusta Diiniga ah iyo Xifdiga Quraanka. Dugsi Kasta waxa uu leeyahay Masaajid lagu tukado oo ay ku suganyihiin Xer wax ka barta.